Eeg Wax Dhah Wax - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha-ISD 834
Eeg Wax Dheh Wax
Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga waxay rabaan dhammaan ardayda, waalidiinta iyo shaqaalaha inay dareemaan raaxo leh inay soo socdaan haddii ay wax ogaadaan ama ay rumaysan yihiin in qof dhib qabo ama u dhaqmayo qaab umuuqda mid aan badbaado lahayn ama caafimaad qabin. Haddii aad wax maqasho, u fiirso dabeecado qariib ah, ama aad aragto qoraal ku saabsan baraha bulshada - fadlan la hadal.
Fadlan buuxi foomka hoose si aad noogu soo wargeliso wixii walaac ah. Dhammaan macluumaadka la soo gudbiyey dib ayaa loo eegi doonaa loona wajahayaa iyadoo la raacayo siyaasadaha degmada. Si aad u soo sheegto halista soo socota, wac 911.
Hanjabaad - Haddii tani ay tahay khatar soo socota, wac 911
Fadlan xulo ilaa 4 xulasho
Haddii aad jeclaan lahayd inaad bixiso sharaxaad kooban, fadlan sidaas ku samee halkan.
Meel aan la garanaynDhamaan GoobahaDugsiga Hoose ee Afton-LakelandDugsiga Hoose AndersenDugsiga Hoose ee BrookviewHarada Elmo ElementaryDugsiga Hoose Lily LakeDugsiga Hoose ee RutherfordDugsiga Hoose StonebridgeDugsiga Dhexe ee Oak-LandDugsiga Dhexe ee StillwaterDugsiga Sare ee Stillwater AreaSt. Croix Valley Centre Learning Center (ALC)Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore (ECFC)Xarunta Waxqabadka Pony (PAC)Dhismaha Adeegyada Dhexe (CSB)Oak Park
Walaacan waxaa lagu soo sheegi doonaa si qarsoodi ah HADDII aadan bixin macluumaadka xiriirka ee hoose. Fadlan ogsoonow inaad noo oggolaato inaan kula soo xiriirno waxay naga caawin kartaa inaan wax ka qabanno oo aan yareyno walaaca sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.